गफ ! .....: यस्को पनि शिर्षक छैन त्यसैले गन्थन भनुँ क्यार
Posted by दीपक जडित at 12:39 AM
लुनाजीले सिर्जनामा तपाईंको निरशपनबारे कुरो उप्काउनुभएको थियो, तर नयाँ वर्षमा त तपाईं साँच्चै अत्यासमा पो रहनुभएछ ।
हुन त परिदृस्य सबैतिर निसास्सिँदो देखिन्छ, तर आफुलाई जोगएर हिंड्नुपरेको छ, के गर्नु ! हेरौँ, नयाँको नाममा साँच्चै पो केही हुन्छ कि ?
पशुपति पुगेपछि लेखेको गीतले चस्का लगायो दीपकजी ! हुरुक्कै बनाउने भव उन्नुभएको छ । यो पोष्टभरि तपाईंको संवेदनशीलता पाएर नतमस्तक भएँ ।
गन्थन पढेँ, पढेँ, मेरो दिमाग ले केही भेट्टाएन, शिर्षक जुराउन । अर्को पोष्टमा चाँहि शीर्षक जुराइदिउँला है !
सर्रर पढ्दैं जाँदा एउटै टाँसोमा गित, कविता र पशुपतिको 'जात्रा' पनि एकै ठाँउमा हालेर गज्जबसंग स्वादिलो खिचडी बनाउनु भएछ ।
तपाईले 'भगवानको अगाडी उभिएर कहिल्यै केहि मागेको छैन' भनेकोमा म भने विना कुनै प्रश्न विश्‍वास गर्छु । किनकि म पनि केहि माग्दिन।
सृष्टीकै सबैभन्दा चेतनशील प्राणी बनाएर जन्माईसकेपछि अझै के माग्ने?
अरु साथीहरुलाई पनि चित्त नबुझ्ला तर मेरो विचारमा मानिसले भगवान संग केवल यौटै कुरा मात्र माग्न मिल्छ। त्यो हो माफी ।
सम साम यिक जल्दो बल्दो बिषय बस्तुमा दर्हो सँग लेख्नु भो दिपक जि ।
कबिता - गजल उहिले लेख्नु भए पनि अहिले को पिर मा लेखिए झै छन ति ।
निरन्तरताको कामना गर्दछु । साथइ मेरो मनको पिर पोख्ने अनुमती पनि माग्छु है ?
" दुख्नु नै हाम्रो नियती बनेछ "---
जिबनको घडा बिताएका छौ ?
अनी त्यहा थाकेका छौ ?
त्यो पनि पानी पिउन नपाएर !
हो , ठीक त्यस्तै
म गलेकी थिए
एक्लै एक्लै आफ्नै मन सँग
किन मन कहिले काही
मरुभूमिमा पारीणत भाईदिन्छ यसरी !----
त्यतिखेर सोच्ने माथिङ्ग्ल
सार्है थाक्दो रहेछ
असाध्यै दुखेर --
अनी जब कोही
बादल बनेर छ इदिन्छ
मरुभूमी तुल्य मन माथिको आकाश मा
आँखाबाट आशु ब र् र् र् झर्दो रहेछ
एउटा आश मा - बिश्बास मा ---
त्यो आश - बिश्बास
कती मिठो र आत्मिय हुन्छ
म यहाँ कसरी बर्णन गरु !
तिमी त्यही बादल भएका छौ
असाध्यै दुखेकी थिए
अहिले चित्त बुझाउदै छु
तिमी पनि दुखेको देखेर
के गर्ने !
दुख्नु नै हाम्रो नियती बनेछ !---
धेरैदिनको आगमन पश्चात स्वागत जडित जि... सुनेको थिए दिपकजिको संसारमा पुगियो भने नतमस्तक् भैइन्छ भनेर । नभन्दै आज भावना र अनुभवको समिश्रण्ले गोरेटोमा हिडदै गरेको एउटा सिकारुलाई नयाँ सिकाइको ढोका खुले जस्तै लागिरहेछ ।
अनि जडित जि यसरि लामो समय सम्म चाहि हराउन पाइदैन ल। बिन्ति...........
दीपक जी तपाइले त धेरै दिनको कुराहरु गुम्सेर रहेका सबै एक मुस्ट ठेल्नु भएछ नि ! अनि कति बाठो हुनु भएको हामीलाई मुस्किल मा पारेर -खै के शीर्षक दिउ ? उल्टै तपाईलाई नै पो सोध्नु पर्छ की क्याहो कुनि? ल त त्यही प्रश्न त्यतै फर्काए है ?
हार्दिक धन्यवाद सबैलाई प्रतिक्रिया लेखिदिनुभएकोमा ।
धाईबाजी , हेरौं केहि हुन्छ को आस त जतिसुकै हुँदापनि रहने नै हो क्यारे तरपनि बर्तमान बिचल्ली परेको परेकै रहने भो ।
आकारजी अनि बेदनाथजी , यस गन्थनलाई शिर्षक चाहिएला ? यो यस्तै भए नि हुन्छ ।
दिलीपजी , वास्तवमा मान्छेले भगवानसँग माग्ने माफी नै हो ता कि भगवानले माफी दिओस नदिओस मान्छेले अर्को गल्ति गर्न सकोस ।
लुनाजी , सहमती कविता राम्रो लाग्यो । दुखेरै हेरौं कुनै दिन त यो दुखाई सम्झँदा ए हामी त्यसरी दुखेका पनि थियौं नि ? भन्ने दिन आ उला ।
सिकारुजी , नियमित , कम से कम हरेक ३ दिनमा यौटा पोष्ट राख्न भन्छु के हुन्छ कैलेकाँही ढिला भ ईन्छ ।